Sigstr: Yenza, Sebenzisa, kwaye ulinganise iiMikhankaso zokuTyikitya nge-imeyile | Martech Zone
Sigstr: Yenza, Sebenzisa, kwaye ulinganise iiMikhankaso zakho zokuTyikitya nge-imeyile
NgoMvulo, nge-4 kaDisemba ngo-2017 NgoMvulo, nge-11 kaDisemba ngo-2017 Douglas Karr
Yonke i-imeyile ethunyelwa ngaphandle kwibhokisi yakho engenayo lithuba lokuthengisa. Ngelixa sithumela incwadana yethu ukuya kwitoni yababhalisi, sikwathumela ezinye ii-imeyile ezingama-20,000 kunxibelelwano lwemihla ngemihla phakathi naphakathi kwabasebenzi, abathengi, amathemba, kunye neengcali zonxibelelwano noluntu. Ukucela wonke umntu ukuba ongeze ibhena yokunyusa iphepha elimhlophe okanye i-webinar ezayo ihlala ihambela phambili ngaphandle kwempumelelo encinci. Uninzi lwabantu lusityeshela nje isicelo, abanye bayangcolisa ikhonkco, kwaye abantu abanokuthi bacofe umnxeba wokwenza isenzo abasifumani.
Ukuba awukholelwa ukuba utyikityo lwe-imeyile lubalulekile, jonga olu luhlu lokujonga umkhondo wobushushu ukusuka Eyequant.
Kulapho Sigstr ngena! I-Sigstr ibonelela ngolawulo oluphambili kwimikhankaso yakho yokutyikitywa kwe-imeyile apho bonke abasebenzisi banokuhlaziywa kwangoko. Imikhankaso inokwakhiwa ngokufaka umfanekiso okanye ukufaka isicatshulwa. Abasebenzi bakho akufuneki bahlele umgca omnye wekhowudi-iqela lakho lokuthengisa linokutshintsha imikhankaso nanini na befuna.
I-Sigstr ikwanikezela neenguqulelo ezifanelekileyo zephulo leselfowuni kunye nedesktop enomboniso wazo zombini. Ewe kunjalo, uSigstr ubonelela ngokulula kubahlalutyi ukubonisa inani lamaxesha eli phulo lijongwa kunye nokucofa ngephulo okanye ngumqeshwa!
I-Sigstr ikwavumela ukuba amaqela enziwe. Eli luphawu olukhulu ukusukela ukuba unokuba neqela leqela lakho lenkxaso elinikezelwe kwiphulo lokukhuthaza imveliso entsha, ngelixa iqela lakho lokuqesha labelwe iphulo lePhepha leMisebenzi, ngelixa iqela lakho lokuthengisa likhuthaza iphepha elimhlophe kwiReturn. kutyalo mali lwesisombululo sakho!
Oku kuvumela abasebenzisi ukuba bongezwe kumaqela kwaye emva koko iqela ngalinye linokongezwa kwimikhankaso ethile! Ndonwabile kakhulu Sigstr esityikitye kwangoko- kwaye kuye kwamnandi ukusebenzisa nokulawula abasebenzi bethu.
Ukudibana kweSigstr ye-imeyile
Ukuhambisa i-Sigstr elula kulo naliphi na ishishini kuba ngoku bedityaniswa ne-Active Directory, Outlook, Exchange, Office 365, Google Suite, Gmail kunye neApple Mail.
Umthetho-Kwi- Yandisa iinzame zakho zokuthengisa ngaphakathi koMthetho-ngokufaka utyikityo lweSigstr kunye nephulo kuMthetho we-imeyile zonxibelelwano.
Hubspot -I-Sigstr ikwanodibaniso kunye Hubspot apho ungangqamanisa khona nayiphi na Hubspot Uluhlu lwe-Smart kwaye uyinike iphulo elithile le-Sigstr ABM, jonga iziganeko zexesha kwi Hubspot xa becofa, yenza ngokuzenzekelayo Hubspot abafowunelwa ngokubhekisele kubani abathumela i-imeyile, kwaye basebenzise ukusebenzisana kotyikityo lwe-imeyile ekusebenzeni Hubspot Ukuhamba komsebenzi!
UMarketo -Lungelelanisa ukuthengisa kwakho utyikityo kunye noMarketo uLuhlu oluLungileyo kunye namaphepha okufika. Unokudibanisa iisiginitsha kunye neetemplate ze-imeyile zeMarketo.
lesforce -Lungelelanisa ukuthengisa kwakho utyikityo kunye nemikhankaso ye-Salesforce kunye neengxelo. Unokudibanisa utyikityo kunye neetemplate zeVisualForce.
IntengisoLoft - Faka isicelo sokutyikitya kweSigstr kunye nephulo kunxibelelwano lwakho lwe-imeyile yeCadence
Uxolo -Lungelelanisa ukuthengisa kwakho utyikityo kunye nemikhankaso yePardot kunye neengxelo. Unokudibanisa iisiginitsha kunye neetemplate ze-imeyile zePardot.
Cela iSigstr Demo
tags: Umthetho-OnUmdlali weqongaUkutyikitywa kwe-imeyileamabhankiamaphulo emailumqondiso we imeyileutyikityo lwe-imeyileukulandela ilisoimephu yobushushuhubspotUtyikityo lwe-hubspot nge-imeyileuphawuUkutyikitywa kwe-imeyileuxolelopardot utyikityo lwe-imeyileAbatyikityo be-imeyilesayinasigstr
IChartio: Ukuphononongwa kweDatha esekwe kwiLifu, iitshathi kunye neeDashbhodi eziDibeneyo
Ezona zenzo zibalaseleyo zi-6 ekufuneka uzilandele xa usakha iphepha lokungabhalisi